Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » Waxaa la bilaabay dalxiiskii gobalada bariga Afrika
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Iyada oo la raacayo madal dalxiiska gobolka EAC, ololuhu wuxuu kor u qaadi doonaa xirmooyin dalxiis oo kala duwan oo ka jira gobolka oo lagu beegsanayo shanta dal ee xubnaha ka ah Tanzania, Uganda, Burundi, Kenya, iyo Rwanda.
Olole madal dalxiis goboleed ayaa loo bilaabay muwaadiniinta Bariga Afrika.
“Booqo Guriga” ama bartilmaameedka ololaha Tembea Nyumbani si loogu dhiirrigeliyo muwaadiniinta Bariga Afrika inay is booqdaan.
Ololahan ayaa ujeedadiisu tahay in lagu dhiirrigeliyo ganacsiga dalxiiska ee gobolka dhexdiisa iyadoo lagu soo bandhigayo hanti badan oo dalxiis oo qarsoon iyo xirmooyin fasax oo xiiso leh oo la awoodi karo.
Kahor Bandhiggii Dalxiiska Gobolka ee ugu horreeyay oo ay soo qabanqaabiyeen dowladaha xubnaha ka ah Bulshada Bariga Afrika (EAC), madal olole dalxiis ayaa la bilaabay si loo kiciyo socdaalka gobolka ee dalalka xubnaha ka ah.
Dhawaan la bilaabay, ololaha “Booqashada Guriga” ama ololaha Tembea Nyumbani oo saddex bilood jirsaday ayaa looga golleeyahay in lagu kiciyo muwaadiniinta Bariga Afrika si ay isugu booqdaan waddamada xubnaha ka ah dadaallada lagu hormarinayo ganacsiga dalxiiska gudaha iyo gobolka ee ku dhex jira barxadda EAC.
Ololahan ayaa ujeedadiisu tahay in lagu dhiirrigeliyo ganacsiga dalxiiska ee gobolka dhexdiisa iyada oo lagu soo bandhigayo khasnado dalxiis oo qarsoon iyo xirmooyin fasax oo la awoodi karo oo xiise leh oo lagu sahamin karo ruuxa meelaha sixirka Afrika.
Ololuhu wuxuu gudbinayaa farriin ah “Dal kasta oo Bariga Afrika ah oo aad u safarto, waa Guri ka fog guriga” si loo soo jiito muwaadiniinta gobolka si ay u soo booqdaan meelaha soo jiidashada leh ee laga heli karo waddan kasta oo xubin ka ah.
Waxaa sidoo kale la filayaa inay kordhiso xiisaha dadka deegaanka EAC ee ah inay ku safraan gobolka dhexdiisa kadibna ay soo nooleeyaan warshadaha dalxiiska, oo halbowle u ah malaayiin qof oo ku nool Bariga Afrika.